ISIKHOKELO ESIPHAKAMILEYO SAMA-25 SOKULUNGISA IINWELE ZAMADODA (ISIKHOKELO SIKA-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda Phezulu kwe-25 yokuLungisa iiNwele eziNcinci zamadoda
Ngaba ujonge ukulungiswa kweenwele eziphantsi kwabafana abanesitayile ngaphandle komzamo? Ukufumana iinwele zamadoda ezilula ezisabonakala zihle kunokuba ngumceli mngeni. Ngelixa kukho izinto ezininzi ezilula…
Ngaba ujonge ukulungiswa kweenwele eziphantsi kwabafana abanesitayile ngaphandle komzamo? Ukufumana iinwele zamadoda ezilula ezisabonakala zihle kunokuba ngumceli mngeni. Ngelixa zininzi iinwele ezilula ezifuna isitayile esincinci kwaye akukho kugcinwa, ubunzima kukhetho olusikiweyo kunye nesitayile esifanelekileyo kuwe.
Siyazi ukuba iinwele zomfana zibalulekile kuye, kodwa akukho ndoda ifuna ukuchitha ixesha elininzi ilungiselela kusasa. Kwezinye iindlela ezipholileyo, eziphantsi zokugcina iinwele, funda isikhokelo sethu.
1Eyona ndlela ilula yeenwele zamadoda
MbiniUlusu oluphakamileyo luphela + Umgca oPhezulu + kwiCandelo eliLukhuni
3I-Razor Fade + Uyilo loMgca + iBuzz Sika
4Ukuphela kweBald Fade + kweNwele eziNtshileziweyo
5Amacala achetyiweyo + Amfutshane aBhaliweyo aPhezulu + ePhambili ngaphambili
6Amacandelo amafutshane + aQingene nekama ngaphezulu
7Ukuqhawulwa kwe-Undercut + engaxhunyiwe kwi-Hair
8I-Messy Faux Hawk + iTaper ephezulu iphela
9Crew Sika + iindevu ezipheleleyo
10Iinwele eziGotyiweyo + ezantsi ezilahlekileyo + iindevu
Shumi elinanyeUkucheba okuphezulu kweBald + Isityalo saseFrance
12I-Taper Fade + Icandelo + leenwele ezenziwe ngeSpiky
13Iinwele eziPhumayo eziPhakathi + iindevu
14I-Mid Fade + iinwele ezomileyo ezinemibala
Shumi elinantlanuIzinwele ezithunyelweyo
16I-Taper yesiqhelo + indibaniselwano ende ngaphezulu kwe-Brush Back Fringe
17I-Buzz Sika + Fade + 2 Imigca + Ibhokhwe
18Umyalezo + oQinisekisiweyo + weenwele ezinde + iindevu
19Umdwebo omde weLinenji + yoYilo loMgca woLusu oluPhakamileyo
Eyona ndlela ilula yeenwele zamadoda
Ngenxa yokuba zininzi izinto ezithandwayo kodwa ezilula zeenwele kubafana, unezinto ezininzi onokukhetha kuzo. Umzekelo, ngaba ufuna iinwele ngaphandle kwejel okanye imveliso yeenwele? Mhlawumbi uneenwele ezigobileyo kwaye unomdla ngakumbi ekusikeni okufutshane kakhulu okungafuneki nasiphi na isitayile, njenge ukusikwa kwe-buzz , abasebenzi abasikiweyo okanye isityalo saseFrance. Okanye ufuna ukuvumela iinwele zakho ukuba zikhule ixesha elide ukuze ujongeke ungonwabanga, kwaye ujongeke ngendlela emdaka.
Ukuba unethamsanqa kwaye uneenwele ezingqindilili, ezithe tye, sicebisa ukuba isikhumba esingaphantsi okanye sokuphela kolusu olupheleyo kudityaniswe nekama ngaphezulu okanye libuyele emva. Nangona iinwele ezijijekileyo okanye ezi-wavy zinzima ngakumbi, naziphi na iinwele ezimfutshane ziya kwenza iqhinga. Ekugqibeleni, ukuba ucinga ukuba ukusikwa kwe-buzz yayikukuphela kwento elula yokucheba iinwele, jonga kwigalari yethu engezantsi ukufumana i-hairstyle yesondlo esezantsi enokukufanela!
Ulusu oluphakamileyo luphela + Umgca oPhezulu + kwiCandelo eliLukhuni
I-Razor Fade + Uyilo loMgca + iBuzz Sika
Ukuphela kweBald Fade + kweNwele eziNtshileziweyo
Amacala achetyiweyo + Amfutshane aBhaliweyo aPhezulu + ePhambili ngaphambili
Amacandelo amafutshane + aQingene nekama ngaphezulu
Ukuqhawulwa kwe-Undercut + engaxhunyiwe kwi-Hair
I-Messy Faux Hawk + iTaper ephezulu iphela
Crew Sika + iindevu ezipheleleyo
Iinwele eziGotyiweyo + ezantsi ezilahlekileyo + iindevu
Ukucheba okuphezulu kweBald + Isityalo saseFrance
I-Taper Fade + Icandelo + leenwele ezenziwe ngeSpiky
fumana uphawu lwakho olukhulayo
Iinwele eziPhumayo eziPhakathi + iindevu
I-Mid Fade + iinwele ezomileyo ezinemibala
I-Taper yesiqhelo + indibaniselwano ende ngaphezulu kwe-Brush Back Fringe
I-Buzz Sika + Fade + 2 Imigca + Ibhokhwe
Umyalezo + oQinisekisiweyo + weenwele ezinde + iindevu
Umdwebo omde weLinenji + yoYilo loMgca woLusu oluPhakamileyo
iintlobo zeeperms ezigobileyo
uphawu lwelanga uphawu lwenyanga
iinwele ezimfutshane kunye neendevu
zithini izindlu zam ukuvumisa ngeenkwenkwezi
best haircuts ezimfutshane amadoda
I-10 yeePomades eziLungileyo + zeMveliso yeenwele eziMdaka ngeNwele eNcinci